Showing २१-३० of १५,५४७ items.
उर्लाबारी नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले विजयी
विराटनगर । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार गंगा प्रसाद खरेल विजयी भएका छन् ।उपमेयरमा पनि एमालेका उम्मेदवार मिना कुमारी खतिवडा निर्वाचित भएका छन् । खरेलले निर्वतमान नगर प्रमुख खड्ग बहदाुर फागोलाई पराजित गरेका हुन् । खरेलले १२ हजार १ सय ५६ मत प्राप्त गरी विजयी हासिल गरेका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका मेयर उम्मेदवार फागोले ंलाई १ हजार ८ सय ६६ को मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । फागोको १० हजार २९० मत आएको थियो ।उप्रमुखमा एमालेकी उम्मेदवार खतिवडाले १० हजार ७ सय २८ मत ल्याएर विजयी भइन् । उनका प्रतिस्पर्धी काँग्रेसी सीता कार्कीले १० हजार ६४० मत
सहिदभूमि गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पुनः मनोज राई
धनकुटा । सहिदभूमि गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार मनोज राई १ सय ८७ मतान्तरले विजयी भएका छन् । उनले ४ हजार २ सय १४ मत पाउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीतबहादुर राईले ४ हजार २७ मत पाएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै उप–प्रमुखमा एमालेकै रत्नश्वरी राई विजयी भएकी छन् । उनका प्रतिद्धन्द्धि नेपाली कांग्रेसका तोर्ण खड्का रहेका थिए । राईले ४ हजार, ६ सय ७२ मत पाउँदा खड्काले ३ हजार ३ सय ७१ मात्र मत पाएका थिए । सहिदभूमि गाउँपालिकाको मत परिणामअनुसार वडा नं. २, ३, ६ र ७ मा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । वडा नं. १, ४ र ५ मा गठबन्धनक
देवालीमा हिँडेको ट्याक्टरबाट झर्दा एकको मृत्यु
धरान । प्रदेश १ का दुई जिल्लामा भएको सडक दुर्घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको बिर्तामोड–२ रामचोकनजिकै ट्रकको ठक्करबाट ४ नम्बर वडावासी ५१ वर्षीय टङ्क काफ्लेको मृत्यु भएको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार रामचोकस्थित सडक दक्षिणपट्टि पार्किङ गरिएको प्रदेश–१–१०–००१ ख ३५९४ नम्बरको ट्रक पछाडि सारेर सडकमा निकाल्ने क्रममा पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो । ठक्करबाट घाइते बनेका काफ्लेलाई बिर्तासिटी अस्पताल पु¥याउना साथ मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–३ भित्री कच्ची सडक–खण्डमा देवाली पूजा गर्ने मानिस लिएर जाँदै गरे
थोत्रो गाडीमा ड्राइभर परिवर्तन गर्दैमा रफ्तारले चल्दैनः विनोद चौधरी
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको पछाडि वर्तमान सरकारको कुनै पनि दोष नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले अर्थतन्त्र बिग्रनुको पछाडि विगतका सरकारको खराब नीतिको परिणाम भएको बताए ।उनले भने, “थोत्रो गाडीमा ड्राइभर परिवर्तन हुँदैमा गाडी रफ्तारले चल्दैन । नेपालको खराब अर्थतन्त्र भयो भनेर अर्थमन्त्रीलाई दोष दिनुमा कुनै तुक छैन ।” वर्तमान सरकारले बजेट पनि नल्याएको सन्दर्भमा दोषमात्र लगाउने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाए छ ।नेपालको अर्थतन्त्र
बिर्तामोडमा ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु
ट्रकको ठक्करबाट झापामा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको बिर्तामोड–२ स्थित रामचोक नजिकै ट्रकको ठक्करबाट बिर्तामोड–४ का ५२ वर्षीय टङ्क काफ्लेको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।रामचोकस्थित सडक दक्षिणमा पार्किङ गरिएको ट्रक सडकमा निकाल्ने क्रममा पैदलयात्री काफ्लेलाई ठक्कर दिएको थियो । प्रदेश–१–१०–००१ख ३५९४ नंको ट्रक ब्याक गरेर सडकमा निकाल्ने क्रममा पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका काफ्लेलाई उपचारका लागि बिर्तासिटी अस्पताल पु¥याउनासाथ मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
धरान ८ मा एमालेकाे प्यानल विजयी
धरान उपमहानगरपालिकाकाे ८ नम्बर वडामा नेकपा एमालकाे प्यानल विजयी भएकाे छ । निर्वाचना अायाेगकाे कार्यालयले सार्वजनिक गरेकाे अन्तिम मतपरिणाम अनुसार एमालेबाट वडा नम्बर ८ काे अध्यक्ष पदका उमेदवार धनबहादुर राई १७२५ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका छन् । उनकाे निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका उत्तम राईले ९०८ मत प्राप्त गरेका छन् । वडाकाे महिला सदस्यमा एमालेकी देवी लामा, दलित महिलामा सावित्री परियार, खुल्ला सदस्यहरूमा देवी प्रसाद पाेखरेल र रविन्द्र श्रेष्ठ विजयी भएका छन् ।
बराहक्षेत्रमा १० र ११ मा कांग्रेसकाे प्यानल बिजयी
वराहक्षेत्र नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले वडा नम्बर १० र ११ मा प्यानलसहित विजयी भएकाे छ । वडा जम्बर १० मा लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनका उम्मेदवार काँग्रेसका तेज बहादुर गुरुङ्गले २३५३ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका मणिराज तामाङले ७३२ मत पाएका छन् ।त्यस्तै , वडा नम्बर ११ मा काँग्रेसका कृष्ण कुमार महतो विजयी भएका छन् । उनले ११०४ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटलम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादीका राज कुमार साहले ७८० मत प्राप्तका थिए । भने एमालेका गोकुल प्रसाद श्रेष्ठले ५७२ प्राप्त गरेका थिए ।
सिरहा र कर्जन्हा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विजयी भएका छन् । सिरहा नगरको उपप्रमुखमा पनि एमालेले नै जित हासिल गरेको छ । सिरहाको नगरप्रमुखमा डा नवीन यादव र उपप्रमुखमा बबिताकुमारी साह विजयी भएका छन् । डा यादवले ११ हजार १४३ मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उपेन्द्रकुमार यादवले आठ हजार ७३२ मत ल्याए । यस्तै उपप्रमुखमा साहले १० हजार १२६ मत ल्याएर निर्वाचित भए भने उनको प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सरिता यादवले आठ हजार ५७७ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै कर्जन्हा नगर प्रमुखमा एमालेकै भोलाप्रसाद पोखरेल तीन हजर ८३९ मतका साथ निर्वाचित भएका छन् । उनका
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका विमला राई र उपप्रमुखमा सोही पार्टीका रमेश राउत विजयी भएका छन् । राईले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले)का खडेन्द्रकुमार राईलाई ३५१ मतले तथा राउतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार अमेम्बर राईलाई २७३ मतले पछि पार्दै प्रमुख र उपप्रमुखमा विजयी भएका हुन् । विमलाले छ हजार ३१७ मत ल्याएर विजयी हुँदा खडेन्द्रले पाँच हजार ९६६ मत प्राप्त गरेकाे निर्वाचन अधिकृत सङ्गीता न्यौपाने (ढुङ्गेल)ले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपप्रमुखमा राउतले पाँच हजार ९३४ मत ल्याएर विजयी हुँदा राईले पाँच हजार ६६१ मत ल्याएका छन् । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा
२८ लाख बढीकाे सुनसहित एक पक्राउ
प्रहरीले अवैधरुपमा भारतबाट नेपाल भित्र्याउँदै गरेको २८ लाख बढीको सुनसहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा कैलाली घर भई हाल दमक नगरपालिका–२ बस्ने ३३ वर्षीय धीरेन्द्र जैसी रहेको १ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । जैसीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाको टोलीले मङ्गलबार मेचीनगर–६ स्थित पुरानो मेची पुलछेउबाट पक्राउ गरेको हो । जैसीको साथबाट बरामद गरिएको ३४९ दशमलव ७०० ग्राम सुन हालको बजार मूल्यअनुसार २८ लाख ८७ हजार १८२ रकम बराबरको रहेको १ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नवीनराज राईले बताए ।पक्राउ गरिएका जैसीलाई सुनसहित मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट